Akụkọ ifo nke Hercules (Hercales): Nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
na Akụkọ ifo ndị Gris Ọ bụ otu akụkọ mgbe ochie nke nkwenkwe Gris oge ochie, ọkachasị mmepeanya oge ochie nke dị na Eastern Mediterranean. Otu n'ime akụkọ mgbe ochie a kacha mara bụ nke Heracles, bụkwa nke a maara dị ka Hercules maka ndị Rom.
1 Kedu ihe bụ akụkọ ifo nke Hercules?
1.1 Ọrụ iri na abụọ nke Hercules
2 Heracles ma ọ bụ Hercules?
3 Kedu ka Hercules si nwụọ?
Kedu ihe bụ akụkọ ifo nke Hercules?
Akụkọ ifo na -agwa na Heracles bụ nwa Zeus na Alcmena. Mana ọmụmụ ya esiteghị na ịhụnanya, ebe ọ bụ na Zeus gosipụtara dị ka di Alcmena, onye a na -akpọ Onye ọbịa, ma nakwere ụdị ya na -erite uru na ọ gara agha. N'ụzọ dị otú a, ọ bịara mụta nwa nwoke na ya, Heracles. Nke ahụ wetara ọdachi ndị na -eto eto Heracles, dị ka nwunye Zeus, Hera, mgbe ọ mụtara ihe wee kpasuo ya iwe, ọ bụ ya na -ahụ maka imekpa ndụ Heracles kemgbe ọ bụ nwata.
Heracles emeghị ya amaara ya na o nwere oke ọgụgụ isi ma ọ bụ amamihe, ihe kacha masị ya bụ mmanya, nri na ụmụ nwanyị. Ọ dịkwa oke iwe, nke mere ka ọ kwụsị ịchịkwa ike ya na -enweghị atụ mgbe ọ bụla o kwere ka iwe were ya. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ihe niile adịghị mma. Ebe ọ bụ na obi dajụrụ ya ozugbo, ọ bịara ghọta ịdị arọ nke omume ya ma nakwere ntaramahụhụ kwesịrị ya. Inweta mkpebi ịghara iji ike ha n'oge oge ntaramahụhụ ahụ dịruru.
Onye dike Gris anyị na Megara mụrụ ụmụ, onye ihe omume dị egwu dabara. Hera, nwunye Zeus, dị ka anyị kwurula, enweghị ike imeri Hercules n'ihi na ọ siri ike karịa ya mere ka ọ ghara ichefu ihe ruo oge ụfọdụ. Heracles, na -enwe mgbagwoju anya, gburu nwunye ya na ụmụ ya atọ na ọbara oyi na mgbe ọ nwetaghachiri ncheta ya, ọ jupụtara na mwute na ihe mgbu. Iji mezie omume ya, o kwetara ịrụ ọrụ iri na abụọ, nke enyere ya ọrụ mgbe ọ gachara Oracle nke Delphi dị ka ntaramahụhụ maka omume ya.
Ọrụ iri na abụọ nke Hercules
Ndepụta ọrụ, ọrụ enyere n'aka Hercules, iji mee ka mmehie ya dị ọcha wee nye ya ndụ ebighi ebi, ihe ndị a bụ:
Gbuo Ọdụm nemean
Gbuo Hydra nke Lerna
Wepụ ihe Cerine mgbada
Wepụ ihe Erymanthus osisi
Hichaa ya Augean kwụ ọtọ n'otu ụbọchị
Gbuo Nnụnụ Stymphalian
Wepụ ihe Cretan ehi
Ezuru ya Mares nke Eze Diomedes
Naghachi eriri nke Hippolyta, Queen nke Amazons
Zụrụ ehi anụ ọjọọ Geryon
Zuru apụl site na Ogige nke Hesperides
Weghara ma weghachite Cerberus, onye nche nke ifo
N'ikpeazụ, Hercules O jisiri ike merie ọrụ ndị a siri ike iri na abụọ wee nweta ọnọdụ ya dị ka dike kacha ukwuu na akụkọ ntolite Greek, na-esote Achilles, n'ezie, na anyị ga -ahụ na obere akụkọ ifo Grik ọzọ.
Heracles ma ọ bụ Hercules?
Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya kpọrọ ya Alcides na nsọpụrụ nna nna ya Alceo. N'oge chi Apollo gbanwere aha ya ka ọ bụrụ Heracles, onyinye enyere maka ịbụ onye na -ejere chi nwanyị Hera ozi. Ndị Grik mara ya n'aha a mgbe Ndị Rom kpọrọ ya Hercules. Ruo ugbu a, a na -akpọkarị ya Hercules, nke a ka edere ya na akụkọ ihe mere eme niile.
Kedu ka Hercules si nwụọ?
Ihe e ji mara agwa a bụ na ọ bụ nwoke mara mma, nwere oke na ịma mma ya niile. N'ihi nke a ọ chọrọ inwe ọtụtụ mmekọrịta na site na ha ka amụrụ ọtụtụ ụmụaka. Ihe si na ndụ mmetụta uche aghara pụta bụ ọnwụ ya.
Dị ka akụkọ si kwuo, Hercules nwere nwunye anọ. Nke mbụ bụ Megara, onye ya na ya nwere ọtụtụ ụmụ wee gbuo ya n'iwe. Ọ ka amaghị ma ọ bụrụ na ọ hapụrụ ndụ ma ọ bụ na di ya gbukwara ya. Nwanyị nke abụọ ọ lụrụ bụ Queen Omphale, wee bụrụ ohu ha, amabeghị etu ha siri mee.
Mgbe ahụ ọ lụrụ Deyanira, ọ bụ alụmdi na nwunye ya nke atọ. Hercules kwesịrị ịlụso Achelous ọgụ, chi osimiri ka ya na ya nọrọ. Ọ bụ nwunye ikpeazụ ya n'ụwa tupu ọ gaa Olympus dị ka chi. Ndụ ha were iwe mgbe otu oge, na -agafe osimiri, centaur Nesus kwere nkwa ịgafe Deyanira n'akụkụ nke ọzọ ka Hercules na -egwu mmiri.
Onye ọchịagha ahụ jidere oge wee gbalịa ịtọrọ ya. Omume ọjọọ a kpasuru di ya iwe nke ukwuu na ọ laghị azụ ịgba Neso akụ nke nwere ọbara hydra Lerna. Nke a ruru ozu ya wee gbuo ya. N'oké ihe mgbu ya ọ ghọgburu ọmarịcha Deyanira na ọnyà ọjọọ iji megwara Hercules.
Neso mere ka Deyanira jiri akụkụ ọbara ya were ụgha na ọ ga -egbochi di ya ịhụ nwanyị ọzọ. Ọ ga -awụsa ya n'elu uwe ya, ọ ga -enye ya. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu dị iche, ebe ọ bụ nsi na -egbu egbu nke ga -eji obere mmetụ were gbaa akpụkpọ ahụ ya.
Nke a bụ ka Deyanira aka ya dị ọcha si gbuo di ya ọ hụrụ n'anya n'amaghị ama. Hercules nwara ịkwụsị mmetụta nsi na -egbu egbu ma ọ nweghị ike. Mgbe ọ nwụrụ, chi nke Olympus nyere ya anwụghị anwụ zuru oke. N'ime ndụ ọhụrụ ya ọ lụrụ Hebe, nwunye ya nke anọ.
Ọ bụrụ na -amasị gị nke a chịkọtara akụkọ ifo Greek nke Hercules, ị nwere ike ịga na webụsaịtị anyị ndị ọzọ, ebe anyị nwere ọtụtụ akụkọ ifo Greek nke chi niile na ndị dike nke akụkọ ifo Greek. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla akọwapụtara ma ọ bụ akụkọ ifo nke ịchọrọ ịhụ nke ọma, biko hapụ anyị okwu anyị ga -anwa inyere gị aka.
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Akụkọ ifo nke Hercules